စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းများနှင့်ရရှိနိုင်သည် Linux မှ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | GNU / Linux များ, NOTICIAS, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ
ထုံးစံအတိုင်း Linus Torvalds ကြော်ငြာ သော Kernel မူကွဲ ၃.၂, အရာစိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းပါဝင်သည်သော ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ကိုတွေ့နိုင်တယ်.
Ext4 ထက်ပိုကြီးတဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအရွယ်အစားထောက်ခံပါတယ် 4KB ထ 1MB အရာကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေနဲ့အတူစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေ။
Btrfs ၏ဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်တယ် ပွတ်တိုက်ခြင်း (ဖိုင်စနစ်ကိုစစ်ဆေးသည့်စစ်ဆေးမှုစင်တာအားလုံးကိုစစ်ဆေးပါ) ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ၊ အရေးကြီး metadata များကိုအလိုအလျောက် back up လုပ်ပြီးယခု system file ကိုကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Process Manager သည်အများဆုံး CPU အချိန်ကန့်သတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ခြင်းအတွက်ထောက်ခံမှုထပ်မံပေးခဲ့သည်။
မိုးသည်းထန်စွာ disk ရေးသားမှု၏ရှေ့တော်၌ Desktop ကိုတုံ့ပြန်မှုတိုးတက်ခဲ့သည်။
သည် TCP ၎င်းသည် packet ဆုံးရှုံးမှုအပြီး connection ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုအရှိန်မြှင့်သည့် algorithm တစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိရိယာ "ထိပ်တန်းထိပ်" လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စာကြည့်တိုက်များကိုတိုက်ရိုက်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့များထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်
အဆိုပါ device ကို mapper များအတွက်ထောက်ခံမှုကဆက်ပြောသည်သိရသည် Thin supplying.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ချက်တွင်ထင်ဟပ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးသတင်း။ ငါမူကားဤဗားရှင်းစာစီစာရိုက်ခြင်းနှင့်ငါ့ပြproblemနာအတွက်အဖြေရှိပြီးသား hope မျှော်လင့်ပါတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းများနှင့်ရရှိနိုင်ပါသည်
မားကို့စ Bragado ဟုသူကပြောသည်
Che, အချို့ laptop များတွင်ဖြစ်ပွားသော power ပြproblemနာကိုငါဖြေရှင်းလိမ့်မည်မသင်မသိပါ။
မားကို့စ Bragado အားပြန်ပြောပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာမင်းပြောတဲ့အတိုင်းငါ့ရဲ့အီးမေးလ်ကိုအသိပေးရုံပဲ ^ - ^
ဘယ်စွမ်းအင်ပြproblemနာကိုသင်ရည်ညွှန်းနေတာလဲ။ ပါဝါ adapter မှပြတ်တောက်သွားသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားပါသည်
၎င်းသည်သုံးစွဲမှုပြproblemနာဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာဘက်ထရီသည် ၃၀% လျော့နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၂.၃၈ kernel ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်လတစ်လကျတော့ဘက်ထရီမှာ xD မရှိတော့ဘူး။
တရားဝင် kernel မှာချို့တဲ့သောအရာတစ်ခုမှာ Graphic acceleration ကိုသူတို့ထည့်သည်သို့မဟုတ် ၄ င်း integrate support နှင့်အတူလားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး၊ ငါမှာ Intel GMA 4500M ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ရှိပြီးဂရပ်ဖစ်အရှိန်မရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အလေးအနက်ထား ???? ငါမှာ Intel အတူတူပဲ။ Chakra မှာပြproblemsနာမရှိဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားမှာ Ubuntu နဲ့ပြyouနာရှိနေတာအံ့သြသွားတယ်။ ငါ distro မှလာနှင့်အနည်းဆုံးငါရှုထောင့်၌ငါကျရှုံးဘယ်တော့မှပေမယ့်ဟေး, တစ် ဦး ချင်းစီစက်ကမ္ဘာကြီးကို !!!
ငါဆိုလိုတာက http://goo.gl/VEYre http://goo.gl/Tj2YZ ၎င်းသည်စနစ်များကိုအထောက်အပံ့မရှိခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည် bug များနှင့် bug များလွန်းခြင်းကြောင့်အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် Debian iso ကိုဖန်တီးပါ
Linux ရှိ terminal မှအခြားနည်းလမ်းများ